4 AS yakasimudzirwa kuvakazve Indonesia kusimba uye kukwikwidza mushure meCOVID-19 denda.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » 4 AS yakasimudzirwa kuvakazve Indonesia kusimba uye kukwikwidza mushure meCOVID-19 denda.
Indonesia Ministry of Tourism uye Creative Economy iri kushamwaridzana nekuvandudzwa kwekusimba uye kukwikwidza kukurudzira kumutsidzirwa kwemabhizinesi mushure mekurohwa neCOVID-19 denda.
Kuzadzisa chinangwa, Ministry yakagadzira zvirongwa zvinotarisa pa "4 AS" nheyo: dzinoti Kerja KerAS (kushanda nesimba), CerdAS (smart working), TuntAS (zvakakwana), uye IkhlaAS (yakaperera). Bazi rine tarisiro yekuti iyo 4 AS ichave yakakosha kukosha kune yekushanya uye maindasitiri ekugadzira kuvakazve mabhizinesi avo uye kumutsiridza hupfumi hwenyika.
Iyi "4 AS" misimboti yakavambwa zvichitevera COVID-19 denda kukanganisa kushanya uye bhizinesi rekugadzira nyika yese, uko kusati kwadzorwa magariro nehupfumi kuyera kupararira kwehutachiona, yaive nemamiriyoni gumi nematanhatu evashanyi vanosvika muna 16.11 uye yakadonha makumi manomwe neshanu. 2019 miriyoni muna 75.
Hurumende yanga ichishanda pachirongwa ichi nekugovera mari dzekudzosera kumaindasitiri ezvekushanya nekugadzira zvinhu. Kubva muhafu yekutanga ya2020, indasitiri yekushanya muIndonesia yakarasikirwa nemamiriyoni makumi masere neshanu eIndonesia rupiah mumari yekushanya, neindasitiri yehotera neyeresitorendi inofungidzirwa kurasikirwa inosvika zviuru makumi manomwe zvemadhora eIndonesia rupiah.
Chimwe chezvirongwa idanho revadzidzi vezvikoro zvebhodhingi zvechiIslam zvinodaidzwa kuti "Santri Digitalpreneur Indonesia" inotarisana nekudzidziswa uye kudzidzisa "santri" (vadzidzi) kudzidza hunyanzvi hwedhijitari uye kuishandisa seguta ravo kuti vave digitalpreneur kana kushanda mukugadzira. industry.